ဟွန်ဒါ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ဟွန်ဒါ CBR 150R 2012 စက်ဘီးပထမဦးစွာစီးနင်စက်ဘီး 135cc-165cc Autocar အိန္ဒိယ
2006 HONDA VFR800 ကြားဖြတ်
နှစ်ဆယ် 150: အဆိုပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မက် : 2strokebuzz
ဖလော်ရီဒါ biker ကွန်ယက်™ – တစ်ဦး V-Twin အားဖြင့် Powered
ဟွန်ဒါ Vision ၏ 110 နယူးဟွန်ဒါဆိုင်ကယ် – : P&H ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဟွန်ဒါ 3Q အမြတ်အစွန်းနှစ်ဆ, အရောင်းအားနည်းယန်းထပ်တိုးရ – Nashoba ထုတ်ဝေရေးအွန်လိုင်း
ဟွန်ဒါ 125cc Shine ယခုဟွန်ဒါသမဝါယမ Shine ဖြစ်ပါသည် – Bikes4Sale
2008 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ ဟွန်ဒါ VTX1800 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
သူရဲကောင်း (ဟွန်ဒါ) CD ကို Deluxe : ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်သုံးသပ် – team-BHP
ဟွန်ဒါ Cb 1300 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ် usdrefkoimad
Honda Civic အမျိုးအစား R ကို Concept ကို: ဂျီနီဗာ 2014 – PistonHeads
SEMA ကို Preview: Wraptivo ဟွန်ဒါ CR-Z ကိုအမျိုးအစား-F ကို – Autoblog
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & အရာအားလုံးလုပ်ပါ!
ဤဗီဒီယိုကိုသင်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့မှတ်ထင်ကြဘူး? Zsotyesz87: မှတ်ချက်အရွက် na:: D izaky2011: ပဲငါ့ခမည်းတော်စက်ဘီးနဲ့တူ! Jhon Camille Vergel: ဤအ QE မိတျဆှေအတွက်မိဘများ? ငါ sertgent: r6 ဝမ်ဒါ bediang80: သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုမှုတ်ကဘာလဲဆိုတာ?? Fr3shChriS13: ok ဈ ima တစ် Yamaha r6 get ထင်. 2006 တစ်ဦးက start များအတွက် vin သံမဏိ: သန့်ရှင်းသောဘုရားမထင်မှတ်သောကျွန်မစက်ဘီးဒါမကောင်းတဲ့ချင်, ဤအမှုသည်ငါ့ကားကိုတစ်ဦးတင့်ကားများကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေသည်. Leo motte: သင်တို့ကဲ့သို့ Mano မှခွေးမကနဂါးကိုကိုင်ထားနိုင် 280 လမ်း!!ငါ၏အအိပ်မက် pbmax: စက်ဘီးအံ့သြဖွယ်အသံ. ဂျွန်မုန့်စိမ်း: bullshat 280 ကိုယ်သာ reacht နိုင် 240 🙁အများကြီးလေရှည်များနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဖမ်းရန် im အရမ်းရယ်ရတယ် ရိုးမားနှင့်အမျှ Gerry: Honda သင်ပြုအသွင်အပြင်ပေးအပ်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်ကြောင့် GPS သို့မဟုတ်အလားတူနှင့်သင်၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ရန် ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow
2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ ဖြတ်တောက်မှု အဆိုပါ 2005 ဟွန်ဒါ Silver, Wing နှစ်ခုဖြတ်တောက်မှုအတွက်လာမယ့်နှစ်ခရီးသည်တင် Tour Scooter ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါငွေ Wing အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်နှင့် Silver, Wing ကို ABS. ယင်းကို ABS မော်ဒယ်အနက်ရောင် / ငွေနှင့်တိုက်တေနီယမ် / ငွေအ duotone အရောင်ရရှိနိုင်နေစဉ်အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်အနက်ရောင်နှင့်တိုက်တေနီယမ်အရောင်ရရှိနိုင်. အဆိုပါကိရိယာ panel ကခရီးစဉ် odometer တူသောအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုကမ်းလှမ်း, လောင်စာဆီအဆင့်ကိုသတိပေးကာနာရီ. နှစ်ခုမော်ဒယ်များအကြားတစ်ခုတည်းသောအဓိကကွာခြားချက်ကို ABS မော်ဒယ်စံအဖြစ် antilock ဘရိတ်စနစ်ကကမ်းလှမ်းကြောင်း. အင်ဂျင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များ 50-မြင်းကောင်ရေအားတပ်ဆင်ထားကြသည်, 582-အတူ cc အရည်-အအေးလေးလေဖြတ်အပြိုင်-အမွှာအင်ဂျင်ကို 37 lb. -ပေ. မှာ torque ၏ 6,000 rpm ပါ. ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 20 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Repsol ဟွန်ဒါ – ဗီဒီယိုကိုစွယ်စုံကျမ်း
Repsol ဟွန်ဒါ သမိုင်း [ ပြင်ဆင်ရန် ] တွင် 1995 အဖွဲ့တစ်ထဲသို့ဝင်3Mick Doohan နှင့်အတူမြင်းစီးသူရဲ lineup. အဲလက်စ်Crivilléနှင့်ဟွန်ဒါ NSR500 စီးနင်း Shinichi Itoh. Mick Doohan အာဂျင်တီးနားအတွက်အတန်းအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရ. တဦးတည်းပြေးပြိုင်ပွဲခုနစ်ခုပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူရာသီ၏အဆုံးအဘို့ကျန်ကြွင်းနှင့်အတူ, အဲလက်စ်Crivilléနှင့်အတူစတုတ္ထရာသီပြီးဆုံး 1 Shinichi Itoh ခြုံငုံပဉ္စမပြီးဆုံးစဉ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ. အဆိုပါလေးမြင်းစီးသူရဲကိုလိုင်း-Up အတွက်ဆက်လက် 1997 မိုက်ကယ် Doohan နှင့်အတူ. အဆိုပါဟွန်ဒါ NSR500V အပေါ်ဟွန်ဒါ NSR500 နှင့် Takuma Aoki အပေါ်အဲလက်စ်Crivilléနှင့် Tadayuki Okada. Repsol ဟွန်ဒါအားလုံးအနိုင်ရ 15 Mick Doohan အနိုင်ရနှင့်အတူရာသီလူမျိုး 12 လူမျိုး, နှင့်အောင်ပွဲများအတွက် Giacomo Agostini 's စံချိန်ကိုချိုးဖောက် ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Day6 အိပ်မက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆိုင်ကယ်ခရီးဝေးအလုပ်ဆင်း
Day6 အိပ်မက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း တုရုမြို့တပ်ဦး / နောက် Kenda Komfort 26 x က 1.95 Rim နှစ်ချက်မြို့ရိုးကို, CNC ဘေးနံရံ, ရောစပ် Casette Shimano Derailleur တပ်ဦး / နောက် Shimano Altus 21 အရှိန် Shifter Sram MRX comp + FreeWheel Shimano နောက်ကျောနေ့6custom Injection ကိုပုံသွင်း - lumbar နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံခရီးသွားဗူးနှင့်အတူ အလေးချိန်ခန့်မှန်းခြေ 35 34 ဘီးအခြေစိုက်စခန်း 51 " အလေးချိန်အကန့်အသတ် 250 အလေးချိန်ပေါင် မြင်းစီးသူရဲ Size ကို 5'4 "- 6'3" ခန့်မှန်းခြေ မြင်းစီးသူရဲ Size ကို 4'8 "- 5'7" ခန့်မှန်းခြေ အရောင်များကိုဘော့အပြာရောင်, metallic Burgundy စီးနင်းစက်ဘီးငါ့နေ့ရက်များစွာအတွက်, ငါတော်တော်များများရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းစက်ဘီးအများစုအမျိုးအစားများကိုစီးပါတယ်. foldable ထံမှ, စက်ဘီးစကိတ်စီးရန်, ငါပြီးသားပေါ်မှာဖူးသေချာပါတယ်. ငါငါ Day6 အိပ်မက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသည်အထိသို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါတစ်ဦးက New 250cc V-Twin ဆိုင်ကယ်ကြေညာ, အဆိုပါ VTR
ဟွန်ဒါတစ်ဦးက New 250cc V-Twin ဆိုင်ကယ်ကြေညာ, အဆိုပါ VTR ဟွန်ဒါသူတို့ရဲ့သစ်ကို 250cc v-အမွှာ Entry-level ကိုစက်ဘီး၏အသေးစိတ်အချို့သည်ဖြန့်ချိခဲ့ကြ, အဆိုပါ VTR, ငါတို့မတိုင်မီအများအပြားအချိန်ကြားဖူးတယ်သုံးအက္ခရာများတူသောအသံ. ရှုပျထှေးစသော? သငျသညျအောကျဖျောပွသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ရသောအခါကိုသင်မကြာမီရှုပ်ထွေးမှုများမေ့လျော့လိမ့်မယ်. ကျနော်တို့က hard ကိုယျ့ကိုယျကိုအစာအိမ်တွေ့ရှိ, အဆိုပါအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရပ်ဆိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အထုတ်ပြန်ချက်များ bumpy လမ်းများထွက်လွယ်ကူချောမွေ့အပေါင်းတို့နှင့်ရက်ကြာစီးနင်းများအတွက်အသစ်များကို VTR ပျော်စရာပါစေနှင့်အတူ. , ကြောင်းသော်လည်းကြားမှ, ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်တံဆိပ် Hatch မှာဇယားကွက်ပေါ်မှာဤတနင်္ဂနွေကမြင်နေပါလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်: နိဒါန်း ဒါကြောင့်ဥရောပအသစ်ဖြစ်သော်လည်း, အဆိုပါ VTR ပြီးသားရှိရာ၎င်း၏ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်သက်သေတွင် track record ရှိပါတယ် ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဘင်
ဘင်ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် (B.E.M) Update ကို 8/12 ဘက်ထရီကိစ္စများကြားမှယနေ့အလုပ်မလုပ်ဖို့စက်ဘီးစီး. ငါ Elite ပါဝါဖြေရှင်းချက်ကနေ 72V LifePo pack ကိုဝယ်ယူ. ဒါဟာအပူချိန်ဖော်ပြပေးသောအသီးအသီးကလာပ်စည်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူကြွလာ, ဗို့အား, စွမ်းရည်. ဒါဟာအကြီးအဆင့်မြှင့်ပါပြီသင့်တယ်. သို့သျောလညျး, ငါခြစ်ရာကနေအသစ်တခုဘက်ထရီအိမ်ရာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာယူနိုင်အောင်ငါအကောင်းဆုံးဂဟေဆော်လုပ်ငန်းဘူး. ထိုအခါငါပြုသောအမှုများနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုတက်နှင့်ချိတ်ဆက်တယ်ပြီးနောက်. ငါလက်ျာဘက်ငါ့မျက်နှာကိုအတွက်ကွန်ပျူတာဖွင့်မှုတ်. ဒါဟာအတော်လေးကြောက်စရာခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ပဲငါ့ကိုအသစ်တစ်ခု CPU ကိုကုန်ကျဒါပေမယ့်ကျွန်မစိတ်ထိခိုက်ရမပြုခဲ့. ငါအရေးပေါ်ကျွန်မရှေ့ဦးစွာ မှစ. ခဲ့ကြသင့်ကြောင်းပိတ်ထားဆက်ပြောသည်ကြပေမယ့်ခဲ့ငါ့အ key ကိုပိတ်ထားထင် ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ CBR 150R 2012 စက်ဘီးပထမဦးစွာစီးနင်စက်ဘီး 135cc-165cc Autocar အိန္ဒိယ
ဟွန်ဒါ CBR 150R ပြန်လည်သုံးသပ်, စမ်းသပ်စီးနင်း အဆိုပါ tag ကို "CBR" သေချာပေါက်တစ်ခုထွက်ထွက်-and အားကစားစက်ဘီးဆိုလိုပါဘူး. သို့ဖြစ်., CBR ကလေးမဘယ် character, အဆိုပါ CBR 150R အားကစား? ကျနော်တို့ဟွန်ဒါရဲ့ CBR 250R နှင့်အတူမြင်သည်အတိုင်း, သည် "CBR” နာမတျောကို tag ကိုသေချာပေါက်တစ်ခုထွက်ထွက်-and အားကစားစက်ဘီးဆိုလိုပါဘူး. သို့ဖြစ်., CBR ကလေးမဘယ် character, အဆိုပါ CBR 150R အားကစား? တစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပထမဦးဆုံးအစီးကိုတရားမျှတစွာစိတ်ကူးပေးခဲ့တယ်. တောင်မှရှည်လျားခက်ခဲသည့် CBR 150R စိုက်ကြည့်ပြီးနောက်, ထိုသို့တစ်ဦးကိုယ်ပွားများကဲ့သို့ပုံရသည် 250. အဆိုပါ Y ကို-shaped headlamp, ယင်းအလွှာ Fair, အမြီးအပိုင်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသောအစုံအမြီးဆီမီးခွက်များအတွက်ခြားနားပြားတူညီပုံပေါ်. သို့သျောလညျး, အဆိုပါ CBR 150R ထွက်ကြိုဖို့လွယ်ကူသောလမ်းက၎င်း၏သေးငယ်အိပ်ဇောနဲ့ဆိုရင်တော့ Matte အနက်ရောင်အလွိုင်းဘီးဖြစ်ပါသည်. ...
အခုလည်း: ဟွန်ဒါ | 19 ဇွန် 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2006 HONDA VFR800 ကြားဖြတ်
2006 HONDA VFR800 ကြားဖြတ် – #x0024;7650 (မြောက်အမေရိက Denver) ကျနော်တို့နွေဦးမှပိုမိုနီးကပ်စွာရတဲ့နေ. အသစ်တစ်ခုကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကျော်တစ်ဦးခြေထောက်ပစ်ရန်စုံလင်သောအချိန်! တစ်ဦးက VFR အရာ၏ဤမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါလိမ့်မယ်. ထိုသို့ဖွင့်နိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်, ငါရောင်းချဘို့တရရှိပါသည်! ဒါကြောင့်, သင့် hard-ရရှိခဲ့ပြီးငွေသားလဲလှယ်အတွက်ငါသည်သင်ပြုသောအမှုအနည်းငယ်အရသာကောင်းသောပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပေးမည်, အဖြစ်သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှရော့ခ်အဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ခြင်း. ဤသူသည်ငါပိုင်ပါတယ်ဒုတိယ6မျိုးဆက် VFR ဖြစ်ပါသည်, လူအပေါင်းတို့-န်းကျင်, ကိုယ်လက်-down ကိုအကောင်းဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်အစဉ်အမြဲငါစီးပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ခရီးသည်တာဝန်ကနေတနင်္ဂနွေစစ်သည်တော်မှကုန်တင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှအရာခပ်သိမ်း, ဒီစက်ဘီးကအားလုံးကိုမ. သငျသညျသော်လည်းအံ့သြစေခြင်းငှါ, ဒီလိုလျှင် ...
ဆူဇူကီး AN 650 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Ducati Desmosedici GP11 စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Diavel စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Bajaj Discover Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati 60 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Brammo Enertia KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01